TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA NATAO TAO AMIN’NY LAPAM-PANJAKANA IAVOLOHA - ALAROBIA 02 DESAMBRA 2020
- ALAROBIA 02 DESAMBRA 2020 -
FANDALINANA NY DRAFITRY NY PEM :
Naroso teo anivon’ny Filankevitry ny Minisitra ny fandalinana ny drafitra hitondra ho amin’ny fanarenana sy fampandrosoana an’i Madagasikara ao anatin’ny PEM. Isan’ny nomen-danja amin’izany ny fametrahana ny tanjona sy vina sy ny teti-bidy mifandraika amin’izany araka izay voafaritra ao anatin’ny velirano sy ny politika ankapoben’ny fanjakana ary ireo vina voalaza tao amin’ny IEM. Marihana fa efa maro ireo tetikasa natomboka araka izay voasoritra ao anatin’ny politika ankapoben’ny fanjakana tafiditra ao anatin’ity PEM ity.
Fampandrosoana azo tsapain-tanana sy azo refesina ao anatin’ny fohy ezaka, antenantenan’ezaka ary lavitr’ezaka mba hahafahana mametraka zavatra tsara sy mendrika ho an’ny taranaka faramandimby no handrafitra izany. Hoentina miatrika ireo mpamatsy vola rehetra sy ireo vonona hampiasa ny volany eto Madagasikara ity PEM ity tsy ho ela.
FAMPITAOVANA AVY AMIN’NY PNUD HO AN’NY RAFIM-PITSARANA :
Nankatoavin’ny Filankevitry ny Minisitra ny fandraisan’ny fanjakana an- tanana ny hetra sy ny haba mifandraika amin’ireo fampitaovana nomen’ny PNUD, ho an’ny rafim-pitsarana isan-tsokajiny eto Madagasikara, izay ahitana solosaina sy ireo kojakoja rehetra amin’izany.
II- FANDANIANA DIDIM-PANJAKANA SY VOLAVOLAN-DALANA
Nolaniana nandritra ny Filankevitry ny Minisitra ny volavolan-dalàna mameno ny andininy faha 38 ao anatin’ny lalàna laharana 2018-027 tamin’ny 08 Febroary 2019 mikasika ny maha olom-pirenena sy ny soram-piankohonana.
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Ati-tany sy ny Fitsinjaram-pahefana, sy ny Minisitry ny Fitsarana ary ny Minisitry ny toe-karena sy ny Fitantanam-bola :
Nolaniana ny didim-panjakana manazava ny fomba fiasa sy ny firafitry ny Foibe toerana mitahiry ny maha olom-pirenena sy ny soram-piankohonana na ny Centre National d’Etat Civil et de l’Identité (CNECI).
Araka ny tolo-kevitry Minisitry ny Rahaham-bahiny :
Atoa IRODIA Misalintsoa, dia voatendry ho Tale misahana ny arifenitra.
Ramatoa BOTOTSAKO Vonjy Manantenasoa, dia voatendry ho lehiben’ny distrikan’i Toliara II.
Ramatoa RAZAFITSIMIHANTA Dorcile, dia voatendry ho lehiben’ny distrikan’i Benenitra.
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Mponina, ny Fiahiana ara-tsosialy , ny Fampiroboroboana ny Vehivavy :
Ramatoa ANNICK Gilberte dia voatendry ho Sekretera Jeneraly.
Ramatoa ZAFERA Victoria Andréa, dia voatendry ho Tale misahana ny « Promotion de la Femme et du Genre ».
Atoa RAKOTOARISOA ANDRIAMIADANA Herimampionona dia voatendry ho Tale misahana ny « Système d’Information ».
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana:
Foana ny didim-panjakana laharana faha 2015-1628 tamin’ny 09 desambra 2015, ny didim-panjakana laharana faha-2009-526 tamin’ny 08 may 2009, ny didim-panjakana laharana faha 2009-527 tamin’ny 08 may 2009, ny didim- panjakana laharana faha 2015-1630 tamin’ny 09 desambra 2015 ny didim- panjakana laharana faha 2015-1629 tamin’ny 09 desambra 2015 nanendry ireo Sekretera Jeneraly, ireo Tale Fampandrosoana isam-paritra ary ireo Tale misahana fitantanana ankapobeny eny anivon’ny faritra ao anatin’ny faritra Amoron’i Mania, Ihorombe, Melaky.
Natao androany faha 02 Desambra 2020
Déplacement à Sambava : le Président de la République Andry Rajoelina répond aux besoins de la population locale
TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA NATAO TAO AMIN’NY LAPAM-PANJAKANA IAVOLOHA, ALAROBIA 09 DESAMBRA 2020
TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA NATAO TAO AMIN’NY LAPAM-PANJAKANA IAVOLOHA , ALAROBIA 25 NOVAMBRA 2020